दाङ । आज आमाको मुख हेर्ने दिन रे, यो कस्तो दिन रहेछ मेरी आमा ? वर्षमा एक पटक मात्र आउँने ? मलाई लाग्ने गर्थ्यो कि आमाको मुख हेर्न कुनै दिन पर्खिनुपर्दैन । न त कसैले तोकिरहनु पर्छ ? तर आमा […]
काठमाडौं । शब्दकोश अनुसार ‘राजनीति’ शब्दको मुख्य अर्थ ‘राज्य सञ्चालन गर्ने नीति’ हो । यस अर्थ अनुसार ‘राजनीति’, राज्य सञ्चालनमा संलग्न हुने वा हुन चाहनेले व्यक्तिले मात्रै गर्ने कुरा भयो । अनि धेरैको बुझाइ र अनुभवमा राजनीतिको पृष्ठभूमि र सम्बन्ध […]
दाङ । हो जिन्दगी एउटा यस्तो मैदान हो जहाँ हजारौं,लाखौं ,करोडौं खेलहरु खेलिन्छ । यी विविध खेलहरु खेल्दै गर्दा बिचमा उतारचढाव,लडने-उठने,प्रतिस्पर्धा गर्ने,गाली गर्ने,ईष्र्या गर्ने,आलोचना गर्ने कामहरू निरन्तर रुपमा भइरहन्छ । ठ्याक्कै आफुले गरेको परिकल्पना को आधारमा जीवन कदापि अगाडि बढदैन […]
काठमाडौं । युवा पुस्ताबारे बहस गरिरहँदा हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने वा हामीले बहसको केन्द्रमा राखेका युवा को हुन् ? युवा भन्नेबित्तिकै वैज्ञानिक रूपमा पनि निश्चित उमेर समूहसँग जोडिन्छ । जिन्दगीका अनेक कष्टहरूबाट झेलिँदै गाँस, वास, कपास र एउटा सुरक्षित जीवनको परिकल्पनामा […]
काठमाडौं । बच्चा बेलाको दशै बास्तविक रुपमा एकदम रमाईलो हुन्थ्यो, न कमाउने पिडा न कुनै तनाव बाल्यकालको जिवन बास्तवमा एकदमै सुन्दर हुन्थ्यो । अलिकत टेन्सन सर मिस हरुले दशै तिहार होमवर्क भनेर दिनुहुन्थ्यो । दशै भरि खायो, खेल्यो बसिन्छ जब […]
काठमाडौं । साझा नेता: कमरेड शंकर पोख्रेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा कमरेड शंकर पोख्रेलको योगदान अबिस्मरणिय नै छ। सबैभन्दा बिकास पनि यहि प्रदेशमा नै भयो। कोभिड महामारीको बेलामा जती धेरै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर बने यो सबै उहाँको देन […]
काठमाडौं । हाम्रो देश नेपाल कृषिमा सम्भावना नै सम्भावना बोकेको देश हो । हाम्रो देशमा नेपालमा समग्र अन्य देशहरुमा पाइने हावापानी पाइन्छ । त्यस्तो विशेषता रहेको छ । कुरा विशेषताको होइन कुरा सोचको हो । इजरायलमा ३% ले खेती गर्छन […]
तीज पर्व नारीहरुको सौभाग्य र समृद्धिका निम्ति शिव र पार्वतीको उपासना र पुजा गर्ने पर्व को रुपमा लिइन्छ । विवाह भएर टाढा गएकी चेलीलाई माइतमा ल्याएर दरका रुपमा मिठो–मसिनो खान र राम्रो लाउन दिई पराईघरमा भएका अन्याय अत्याचार ज्यादतीलाई भण्डाफोर […]
पुष्कर कडेल/काठमाडौं । हिन्दीमा एउटा भनाई छ, “पुरानी बात भूल जाओ, अतीत पर ध्यान मत दो।” नेकपा एमालेको हकमा यो भनाई लागु होला कि नहोला भनेर आम प्रगतिकामी जनता, कार्यकर्ता र नेताहरू प्रतिक्षा गरेर बसेका छन्। जनादेशलाई प्रतिगमन देख्ने र […]